“Amazwi KaNkulunkulu Aya Emhlabeni Uwonkana” yingxenye yesibili yamazwi ashiwo uKristu. Kule ngxenye, uKristu usebenzisa isiqu sikaNkulunkulu Uqobo. Ahlanganisa inkathi esukela kuFebhuwari 20, 1992 kuya kuJuni 1, 1992, futhi esewonke ayingqikithi yezahluko ezingamashumi amane nesikhombisa. Indlela, okuqukethwe, nokubuka kwamazwi kaNkulunkulu kula mazwi akwefani neze “Amazwi KaKristu Ekuqaleni”. “Amazwi KaKristu Ekuqaleni” aveza futhi aqondise ukuziphatha kwabantu kwangaphandle kanye nezimpilo zabo zokomoya ezilula. Ekugcineni, iphetha “ngokuvivinywa kwabenzi bomsebenzi.” “Amazwi kaNkulunkulu Aya Emhlabeni Uwonkana,” nokho, avula ngesiphetho sokwaziwa kwabantu njengabenzi bomsebenzi nokuqala kokuphila kwabo njengabantu bakaNkulunkulu. Kuqondisa abantu ovuthondabeni lwesibili lomsebenzi kaNkulunkulu, okuyisikhathi lapho bevivinywa khona ngechibi lomlilo, ukuvivinywa ngokufa, kanye nezikhathi zokuthanda uNkulunkulu. Lezi zinyathelo ezimbalwa zidalula ngokugcwele ububi bomuntu phambi kukaNkulunkulu kanye nobuso bakhe bangempela. Ekugcineni, uNkulunkulu uphetha ngesahluko lapho ehlukana khona nomuntu, ngalokho ephetha zonke izinyathelo zalokhu kubonakala kokunqoba kukaNkulunkulu iqembu labantu lokuqala.
La mazwi ajulile futhi ayinkimbinkimbi; akulula ukuwaqonda, futhi azibambeki izisusa nezinhloso zamazwi kaNkulunkulu. Ngakho, uKristu wenezele incazelo ngemva kwesihloko ngasinye, esebenzisa ulimi okulula ukuthi abantu baluqonde ukuze acacise ingxenye enkulu yamazwi. Lokhu, uma kuhlanganiswa namazwi ngokwawo, kwenza kube lula ngawo wonke umuntu ukuthi aqonde futhi azi amazwi kaNkulunkulu. La mazwi siwenze isithasiselo embhalweni othi “Amazwi kaNkulunkulu Aya Emhlabeni Uwonkana.” Kuwo, uKristu unikeza izincazelo esebenzisa amazwi okulula ukuwaqonda. Ukuhlanganiswa kwalokhu kokubili kuhlangana kahle kakhulu nobunkulunkulu noNkulunkulu esebuntwini. Nakuba uNkulunkulu ekhuluma ngendlela yomuntu wesithathu esithasiselweni, akekho ongaphika ukuthi la mazwi ashiwo uNkulunkulu ngokuqondile, ngoba akekho umuntu ongawachaza ngokucacile la mazwi; nguNkulunkulu kuphela ongacacisa imisuka nezinhloso zamazwi Akhe. Ngakho, nakuba uNkulunkulu ekhuluma esebenzisa izindlela eziningi, izinhloso zemisebenzi Yakhe azilokothi zishintshe, futhi imigomo yohlelo Lwakhe ayikaze ishintshe.
Nakuba “Amazwi kaNkulunkulu Aya Emhlabeni Uwonkana” ephela ngesahluko uNkulunkulu ahlukana kuso nomuntu, eqinisweni, lapha kwakuyilapho umsebenzi kaNkulunkulu wokunqoba nensindiso phakathi kwabantu, nomsebenzi Wakhe wokwenza abantu baphelele, wembulwa khona ngokusemthethweni. Ngakho, bekufaneleka kangcono ngathi ukubhekisela “Amazwi kaNkulunkulu Aya Emhlabeni Uwonkana” njengesiprofetho somsebenzi kaNkulunkulu wezinsuku zokugcina. Ngoba kungemva kwaleli qophelo kuphela lapho indodana yomuntu esenyameni yaqala khona ukusebenza nokukhuluma isebenzisa isiqu sikaKristu ngokusemthethweni, ukuhamba phakathi kwamabandla inikeza ukuphila, inisela futhi yelusa bonke abantu Bakhe—okwaphakamisa amazwi amaningi “Amazwi KaKristu Njengoba Ayehamba Emabandleni.”